crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> March | 2018 | HimiloNetwork
Korneyl American ah oo Diinta Islaamka kusoo biiray!
Zakariya March 31, 2018	Leave a comment 321 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Michael Barnes wuxuu kusoo dhex koray qoys Masiixi ah oo ku nool Alexandria, Louisiana. Waxay toddobaad walba tegi jireen kaniisadaha. Wuxuu ku biiray Jarvis Christian College kahor inta uusan kamid noqon Ciidanka Maraykanka isaga oo 23 jir ah. Isaga oo ku sugan Xarunta Sal-dhig oo Jarmalka ugu taalla, wuxuu kula kulmay askari Muslim ah oo mar walba ka ...
Magaalooyinka Gabdhaha Booliska looga oggol yahay xirashada Xijaabka.
Zakariya March 31, 2018	Leave a comment 436 Views
Washington (Himilonetwork) – Waaxda Booliska Maraykanka ayaa ku kala qeybsan haddii xijaab lagu xiran karo shaqada gudaheeda iyo in kale. 25-ka Laamood ee Booliska Maraykanka, 7 kamid ah ayaa oggol in gabadha Muslimadda ah ay xirato xijaabka xilli ay ku jirto shaqada. Lix kale ayaa diidan. Halka inta kale ay isaga aamusan yihiin gebi ahaanba arrintan. Waaxyaha Booliska ee New ...
Zakariya March 30, 2018	Leave a comment 287 Views
Tokyo (Himilonetwork) – Waxaan maqalnay sheekooyinka shaqsiyaad dunida ku nool kuwaas oo la qabsaday nolol qashin la’aan ah ‘zero waste’, hayeeshe ma ahan aalaaba mid la xiriirta bulsho dhan inay isku daydo nolol ka madax bannaan qashinka. Dadka ku nool Kamikatsu, dalka Japan, waxay dib-u-adeegsadaan ‘recycling’ wax walba oo ay mar qura soo iibsadaan – xilli ay isku dayayaan inay ...
La kulan – Qoyska ku nool Nolol-aan-Balastik lahayn ‘Plastic-Free.’
Zakariya March 30, 2018	Leave a comment 281 Views
Vienna (Himilonetwork) – Suureyso nolol aan lahayn balastik? Taasi waxay la micno tahay majiro kumbuyuutar, moobil, gaari iyo dhammaan wax walba oo aad u tix-gelin karto lama huraan. Waxay kuula dhawaaqi kartaa mid aan suura-geli karin casriga maanta lagu jiro, hayeeshe qoys ku nool dalka Austria ayaa caddeyn u ah in la sameyn karo. Sandra Krautwaschi, oo ku nool xaafad ...
Sheekada Wiilkii iska diiwaan-geliyay Jaamacadda Haweenka Shiinaha.
Zakariya March 29, 2018	Leave a comment 613 Views
Beijing (Himilonetwork) – Wiil 18-jir Shiinees ah ayaa qabsaday baraha bulshada ee caalamka kaddib markii uu iska diiwaan-geliyay Jaamacadda Haweenka Shiinaha – mid kamid ah sababta uu sidaas u yeelana waa inuu helo gabar uu nolosha la wadaago. Iyada oo loo eegayo doorbidista dhallaanka laboodka ah ‘wiilasha’ oo Shiinaha ka dhaqan-qalay xilligii lagu jiray Siyaasadda Hal-cunug (1979 – 2015), hadda dalka ...
Faa’iidooyinka caafimaad ee ku jira Caanaha Geela.
Zakariya March 28, 2018	Leave a comment 2,127 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Geelu waa mid kamid ah nimcooleydu eebe innagu galladay, Waa halbeeg muddaba soomaalidu ku cabiri jireen hodantinimada ruuxa, Waa xoolaha la dhaqdo kan ugu lixaadka weyn oo leh Kurus inkastoo laga helo bartamamaha Aasiya laba kurusle. Sida aan wada ognahay geelu waa noole cajiib ah oo waxyaabo badan oo jirkiisa ka mid ah daawo alle nooga dhigay, ...
La kulan – Samata-bixiyaha Bisadaha qaar kasoo dejiya Geedaha dushooda!
Zakariya March 28, 2018	Leave a comment 303 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Bisaduhu waxay ku xayirmi karaan dhakada sare ee geedaha mararka qaar, mana jiro qof u taagan inuu soo dejiyo. Balse haddii aad ku nooshahay Baton Rouge, Louisiana, waxaad isku halleyn kartaa Randall Kolb, oo 64-jir howl-gab ah kaas oo afartii sano ee lasoo dhaafay Bisadaha qaar kasoo dejiya geedaha dushooda. Dhawaqani wuxuu soo gaaray sannadkii 2014-ka laba maalin kaddib ...
Gabar kalluumeysato noqotay kadib markii aabaheed uu dhintay!
Zakariya March 28, 2018	Leave a comment 269 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Rayaan Abuukar Cali waa 18 jir waxay ku dhalatay kuna barbaartay xerada qaxootiga Kaakuma ee dalka Kenya. Laba sano ka hor ayey Muqdisho ku soo laabatay kadib markii uu aabaheed geeriyooday. Si ay biil ugu radiso reerka waxay miciin bidday badda waxayna noqotay gabadha kaliya ee ka midka ah kumannaanka ka kalluumeysta xeebaha Muqdisho. “Waxaan wadi jiray ...
Jaamacadda California oo soo kordhinaysa Cunnooyinka ‘Xalaasha’ ah.
Zakariya March 28, 2018	Leave a comment 296 Views
USA (Himilonetwork) – Ka arday ahaan dhigta Jaamacadda University of California ee Santa Cruz, Musa Dajani waxaa ku adkaan jirtay inuu helo meel uu ka doonto cunno xalaal ah. Hayeeshe sannadkan ma ahan sidii hore. Wuxuu heli karaa cunno xalaal ah oo loogu diyaariyay kambaska Jaamacadda. Tani waa dadaal muddo dheer soo socday oo ardayda Jaamacadda ee Muslimiinta ah ku doonayeen in loo ...
Eygii Sugaalka ugu jiray Saaxiibkiisa aan usoo noqon doonin!
Zakariya March 28, 2018	Leave a comment 254 Views
Brazil (Himilonetwork) – Sheekada Ey aan magaciisa la sheegin kaas oo muddo afar bilood ah ku gaaf-wareegayay bannaanka hore ee isbitaal uu ku geeriyootay saaxiibkiisii soo korsaday ayaa qabsatay war-fidiyeenka adduunka. Eyga waxaa markii ugu horreysay lagu arkay isbitaalka Santa Casa de Novo Horizonte ee Sao Paolo isla habeenkii anbalaasta lagu keenay ninkii lahaa oo 59 jir dib-jirnimo kusoo koray kaas oo ...
Jaziiradda Migingo – barta kalluumaysiga Harada Afrika ugu weyn ee Victoria
Wax kabaro Lo’da
Ardayda Kenya oo dib ugu laabanaya dugsiyada
Xoogagga Israa’iil oo masjidka Qudus weeraray